Dowladda Soomaaliya oo baaq nabadeed u dirtay Beelaha ku dagaalamaya Gobolka Sool – Hiddo Radio 98.5 FM
Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ayaan darro tahay dagaalada soo noqnoqday, waxaana baaq Nabadeed loogu diray Beelaha Walaalaha ah ee ku dirirsan deegaanada Dhumay, Dharkayngeenyo iyo Nawaaxigeeda, Waxayna tacsi u dirayaan eheladii ay dadkoodi ku geeriyoodeen dirirta sokeeye.
“Madaxwaynaha iyo Ra’iisul wasaaraha Dowlada Federaalka Soomaaliya waxa ay ugu baaqayaan Garaadada, Madaxdhaqameedka, Culumaa’udiinka iyo Waxgaradka degaannadaas in ay u guntadaan nabadda, joojiyaanna dhiigga beelaha walaalaha ah ee daadanaya, Waxaa ayaan darro ah in ay soo noqnoqoto aafadan ragaadisay nabadda iyo xasilooninada deegaanada Gobalka Sool. “ayaa lagu yiri War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta.
“Dowladda Federaalku waxa ay ka qaadan doontaa doorka uga aaddan sidii nabad loogu soo dabbaali lahaa deegaanadaas, Sidoo kale Madaxwaynaha iyo Ra’iisulwasaaruhu waxa ay farayaan Hay’addaha gargaarka dowladda in ay si degdeg ah ugu gurmadaan dadka dhaawaca ah iyo kuwa ku waxyeeloobay dagaalada ka soo cusboonaaday deegaannaddas”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Ugu dambeyn Dowladda Federaalka ayaa ugu baaqday dhammaan umadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo horumarka iyo midnimada lana ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida oo aasaas u ah guud ahaan horumarka shacabka Soomaaliyeed.
In ka badan 40 ruux ayaa ku geeriyootay dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanka Dhumay, waxaana dagaalkan dib u soo cusboonaaday uu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee soo kara deegaanada Gobolka Sool.
Previous Article Xildhibaan C/casiis Lafta Gareen oo gaaray magaalada Baydhabo
Next Article Shirka Madaxda maamul goboleedyada ee Garowe oo maanta la soo gabagabeynayo